उपत्यकामा माइक्रो बस र टेम्पो सञ्चालनवारे यस्तो निर्णय आउँदै, निषेधाज्ञा अझै कहिले सम्म थपिएला ? – List Khabar
Home / समाचार / उपत्यकामा माइक्रो बस र टेम्पो सञ्चालनवारे यस्तो निर्णय आउँदै, निषेधाज्ञा अझै कहिले सम्म थपिएला ?
उपत्यकामा माइक्रो बस र टेम्पो सञ्चालनवारे यस्तो निर्णय आउँदै, निषेधाज्ञा अझै कहिले सम्म थपिएला ?
admin4weeks ago समाचार Leaveacomment 54 Views
काठमाडौ । काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाका वारेमा आइतवार सांझ फेरी नयाँ निर्णय आउने भएको छ । त्यसका लागि उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक बस्दैछ । बैठकले निषेधाज्ञा अझै खुकुलो बनाउँदै थप एक साता लम्बाउने सम्भावना छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले त्यस्तै तयारी गरेको बताएका छन् । आइतवारको निर्णयमा माइक्रो बस र टेम्पो सन्चालनबारे पनि नयाँ नियम लागू हुने बताइएको छ ।
निषेधाज्ञाबारे निर्णय गर्न उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठक आइतवार बस्ने र त्यो बैठकले माइक्रो बस र टेम्पो सञ्चालनवारे पनि निर्णय गर्ने भएको हो ।
यस अघि उपत्यकामा २५ सिट भन्दा बढी क्षमता भएका सार्वजनिक सवारी साधन मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । जोरविरजोर २५ सिट माथिका सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्ने यो निर्णयको यातायात ब्यवसायीले विरोध गरेका थिए । उनीहरुले सरकारले नयाँ निर्णय नगरे सोमवारवाट आफै यातायात साधन चलाउने निर्णय समेत गरिसकेका छन् ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार यसपटक माइक्रो बस र टेम्पोबारे निर्णय हुने छ । संक्रमण फैलिन नदिने उद्देश्यले गत वैशाख १६ देखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी छ । संक्रमण दर घट्दै गएको निष्कर्षसहित हाल निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ।
Previous पुर्व प्रेमिकालाई पल शाहको यस्तो सन्देश, यसरि छुटेको रहेछ ४ बर्षको प्रेम (भिडियो सहित)